Madaxweynaha Somaliland oo ku laabtay Hargeysa – Radio Daljir
Febraayo 14, 2013 5:39 b 0
Hargeysa, Feb 14 – M/weynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud ‘Siilaanyo’ iyo Wafti uu hoggaaminayo ayaa maanta oo (Khamiis ah) ka soo degay madaarka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa, kaddib markii ay socdaal qaaday muddo todobo cisha ah ?ku tageen boqortooyada Ingiriiska.
Waftiga M/weynaha oo ay ka mid ahaayeen wasiirrada arrimaha dibedda, qorshaynta, marwada koowaad ee Somaliland iyo xubono kale, ayaa wada-hadallo la soo yeeshay xukuummadda Britain, kaasoo daba-socday digniin horay uga soo yeertay UK oo ku aaddanayd ka dayrinta xaaladda amni Somaliland.
M/weyne Siilaanyo iyo waftigiisa oo ay garoonka ku soo dhaweeyeen ku-xigeenkiisa iyo xubno kala oo golayaasha dawladda iskugu dhafan, ayaa warbaahinta kula hadlay isla gegida diyaaradaha ee Hargeysa, waxaana uu sheegay dawladda Ingiriiska in ay isla soo turxaan-bixiyeen shaki iyo madmadawyo amnigooda quseeyey, haatanna meeleeyey kala maan-duwanaantii jirtay.
Siilaanyo, waxaa kaloo uu ka hadlay shirka Somalida loogu qaban doono Ingiriiska bisha May ee soo socota, kaasoo uu tilmaamay Somaliland in lagu martiqaaday ka qayb-galkiisa, ayna maamul ahaan ka fara-buuxsanayaan arrinka shirkaas la xiriira, kaddibna ay qaadan doonaan go’aanka ku habboon.
M/weyne Siilaanyo iyo waftigiisu waxay Britain u kicitimeen muddo todobaad ka hor ah, waxaana tagiddooda halkaasi ay salka ku haysay hadal ka soo yeeray dawladda Ingiriiska, kaasoo muwaadiintooda farayey in ay ka soo baxeen Somaliland sababo ammaan dartood, taasoo guux weyn ka dhalisay gudaha Somaliland.